Madaxweyne Farmaajo oo ka dalbaday ururka al-Shabaab inay wada-hadal la furtaan dowladda Soomaaliya | RBC Radio
Posted on June 18, 2017 RBC, Wararka
“Haddii aad la dagaaleysaa dowlad, dowladdaan shacabkaa keenay ee aan wada hadalno, dadkaan haleynina hantidaanna ha burburinna, welina waan ku taagannahay, ilaahay waxaan ka baryeeynaa qoladaasi inuu soo celiyo oo caqligooda ku shaqeeyaan oo ay ka haraan qolada la shaqeysa ee ajanabiga ah.” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Wuxuu tilmaamay madaxweyne Farmaajo, in xilligan aanay shacabka u baahneyn colaad joogta ah, balse ay u baahan yihiin nabad iyi barwaaqo.
Madaxweynaha ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay wuxuu ku cel celinayay baaq uu u diro al-Shabaab,isagoo marka usoo jeedinayay dowladda inay wada-hadal la furtan si xasiloonidda iyo nabadda dalka looga wada shaqeeyo.
Al-Shabaab ayaa muddo dheer oo toban sanno ka badan dagaal ka wada dalka,iyagoo marka doonaya inay afgambiyaan dowladda oo ay ku soo rogaan dalka xukun ay ku sheegen mid islaami ah.